Isu parizvino tine bhonasi yekugamuchira 200 €, iyo mari yekufunga.
Kuti ushandise iyi bhonasi iwe unofanirwa kutanga wavhura account yako, ita yekutanga dhipoziti yako 10 €.
Uye utore 100% bhonasi pane yako yekukwira kusvika 150 €.
Iye anoziva mamiriro akakurumbira ekutora chikamu (iwe unogona kuona pasi peiyo peji guru) inotonga zvese zvikamu zvekusimudzira uku uye zvinounganidzwa pasina mubvunzo.
BWIN APP: Bwin ruzivo kwese kupi!
Nemashandisirwo matsva (uye nharembozha Bwin) yakagadziriswa neanoshanda, mushandisi anogona kuwana uye kutamba kana Paris nhoroondo inonzwa iko kumba uye yekubata skrini kana piritsi.
Android uye iOS inopa yakanakisa mubayiro wemitambo kubheja application. Zvakare nharembozha. Nayo iwe unogona kunakidzwa yakanyanya kutsva Bwin awa imwe neawa. Zvakare, hupenyu hwakakwana hweBwin Paris kuona mutambo uchirarama kure nekumba uye uchida kunakidzwa neParis bwin bwin live.
Ukuwo, kuvapo kwemavheji ebhini maficha emahara ane zvivakwa zvakafanana uye zvakanakira Kana ukasarudza iyi mode. Kuti ushandise sevhisi iyi, ona zvinotevera:
Yakasarudzika mitambo nzira yekubheja (ingave yakarongwa kana Bwin Live) inowanikwa (Chikumbiro cheBwin) nharembozha izvozvi.
Midziyo inoenderana inomhanyisa yazvino vhezheni yeApple uye yazvino Apple brand mhando (iPad uye iPhone), kana zvisiri, hapana dambudziko! Iwe uchiri kukwanisa kuwana iyo browser browser yeiyo smartphone yakawanda.
Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, kukwidziridzwa kwese (mari yemahara, zvisungo, ushamwari, etc.) inowanikwa mune yewebhu vhezheni, saka kana iwe wakabatana neyefoni nhare kana Bwin app yakaziviswa iyoyo, vanodaro zvimwe nekutaura mafungiro avo.
Bwin Maitiro ekunyoresa ari kure kubva nyore uye intuitive, mhedzisiro, pasina kupokana, huwandu hwe zviito izvo zvinozoitwa kuti zvichengetedze kuchengetedzwa kwemisha yedu uye kutevedzera matanho akagadzwa neDirector Directorate yekubhejera. (chibvumirano cheBazi rezveMari uye Public Administration).
Asi sezvo iri chengetedzo yedu, wagamuchirwa.
Aya mabvunzo haavhunduke: maitiro anogona kunge akareba achienzaniswa nekurekodha mamwe masevhisi, asi yakajeka uye yakapusa.
Isu tinongo fanirwa kungwarira uye nekutevera mirairo yake. Mushure mezvese kubhejera mari yedu uye ichi chinhu chakakomba.
Pasina mubvunzo, kugona kwakasimba kushandisa zvizere rako rejista
Yedu yewebhu yekutsvaga injini inotsvaga (Google mune yangu), iwe unosvika kune iyo main peji, kwatakaudzwa kuti kukurudzira kwenguva yekushandira.
Kwedu, bhonasi we 200 euros, kuti takatotaura.
Mushure mekunge maita sarudzo panguva iyoyo, taifanira kuzadza iyo chaiyo, basa richava nyore kana iyo otomatiki kusarudza kwebrowser yako yakamiswa, asi maziso ayo iwo akakodzera dhata!
Shamwari dzake dzinoshandisa
Nemabhonasi aya anopa paris online bwin bwin Poker uye akakunda kaviri naBwin. Tevedza nhanho idzi kuti uwane kukwidziridzwa uku uye uwane mwero pasina shamwari.
iyo mari yaunowana nebhachi bhonasi ichabhadharwa mushure mekunge shamwari yako yarova mitambo yakasiyana siyana bwin bwin bwin poker online kasino kana paris kana imwe sarudzo (yeuka kuti pasina dhipatimendi pamativi ese hauna kodzero yemahara mari).
Bwin Kushamwaridzana Bonus (Inotsigira bhonasi yevashandisi vatsva) hapana mubvunzo kuti imwe yeakanakisa tsika, sezvinoonekwa nemushandisi akanyoreswa uye kushandiswa kwenzvimbo dzakaenzana zverusununguko, zvirinani, nekukurumidza uye nyore.
Dzvanya pane iyo mushandisi account “ushamwari” uye zadza iro ruzivo rwakakosha kushamwari
Vatengi panguva yekunyoresa maitiro, mutengesi anofanira kubhadhara kuti awane mukana wekutarisira
Nakidzwa 15 s poker $ 30 in paris!
Maitiro: zita, surname (2), kero, guta, zuva rekuzvarwa, email, runhare (haigone kubvuma, kana uchida, mhando yemishumo, kusanganisira mugumo weParis) uye shandisa yedu Paris mari online.
Isu tinozadza zvisinei nedata richazoshandiswa “pinda” pachikuva.
Iri izita rekushandisa uye password, uye nyaya dzekudzivirira dzinoshanda mune ye password yakarasika uye iwe unoda kudzokera kumashure.
Saka ita chokwadi chekubvunza uye hauna kupindura kudzoreredza kuwana kwedu.
Munguva yekunyoresa, izvo zvisina basa kana uchibika (pachena, Kunyangwe ndaona mamwe macustomer vanhu vari under 18 Makore haanzwisisi kuti sei vaisakwanisa kuchengetedza).
Kana kana uchigara muUnited States nekuda kwedambudziko rako wega nemitemo yaro yakaoma yekubhejera uye yakaoma kubhejera online.
“Kudhinda kudiki” Tadza, kunyangwe kana usiri kuverenga zvakakosha kwete zvakanyanya.
Isu tinoreva kuzadzikiswa kwemaitiro akajairika, iyo mechanics uye hukama pakati pemushandisi uye ipuratifomu yekuunganidza mitambo online.
ROPONESESWA RUDZIMAI- yakazvipira kuRussia neBWIN 2018
Rega ruzhinji rwezvinoitika zvinonakidza zvemitambo yegore. vanobhejera vanoita zvekupfeka mukana portal uye vanokurumidza kupa bhonasi yakasarudzika ne coupon kodhi yemakwikwi. Isu tinoisa bhatiri kutakura huwandu hukuru hwezvakanaka.
bwin mitambo yekubheja pano, kunyanya panguva yeMutambo Wenyika:
In no time, uye chikonzero nei isu takasarudza kuvhara kana kuvhara account yedu, maitiro ari nyore.
Rega tabhu “Rubatsiro” y “Akaunti”.
Tine chirevo chinogona kuita kuti maitiro ekunyorera kana kutumira email vashandisi vevhisi yacho pachayo.
ziva mutsauko: kana maitiro atinoita, asi isu tinokwanisa kuwana iyo account (kunyangwe zvikasadaro) nezita rako rekushandisa uye password.
Kana isu tichida kudzivirira izvi, iwe unofanirwa kugara uchifonera mushandi webasa.
Tinogona kudzima kana kumisa nhoroondo yedu kutora mimwe mitambo mukati menguva yevhiki imwe, mwedzi mumwe, kotara imwe kana kutapudzwa kwenguva (asi zvichingori gore).
Kana isu tikasarudza izvo zvisati zvaitika isu tinofanirwa kugadzirisa chiyero chekubhadhara.